Maraykanka oo markii ugu horreeysey soo bandhigi doona SIR la dhowrayey sanado badan (Maalinta loo qabtay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maraykanka oo markii ugu horreeysey soo bandhigi doona SIR la dhowrayey sanado...
Maraykanka oo markii ugu horreeysey soo bandhigi doona SIR la dhowrayey sanado badan (Maalinta loo qabtay)
(Washington, DC) 11 Maajo 2022 – Guddiga sirdoonka ee Aqalka Wakiillada Maraykanka ayaa qorsheeyay dhegeysi ay ku dabagelayaan 143 muuqaal oo UFO ah oo la soo sheegay intii u dhaxeysay 2004 iyo 2021 oo qura, Wakiilka André Carson (D-Indiana) oo shaaca ka qaaday in dhegeysiga la qorsheeyey Talaadada soo socota, waxaana qaban doona guddi-hoosaadka Guddiga Sirdoonka ee la-dagaalanka argagixisada, sirdoonka, iyo kahortagga sirdoonka qalaad, oo uu guddoomiye u yahay Carson.
“Maadaama ay tani tahay aag dan guud oo xiise sare leh, sir kasta oo aan loo baahnayn waxay caqabad ku noqon kartaa xallinta sirta, ama waxay naga hor istaagi kartaa inaan xal u helno dayacnaan suurtagal ah oo arrintan naga soo gaarta,” ayuu Carson u sheegay New York Times, iyadoo ay noqonayso markii ugu horreeysey ee arrintan la dhegeysto muddo 50 sanadood ah.
Dadka ka hor marag furaya guddi-hoosaadkan waxaa ka mid ah Ku-xigeenka Xoghayaha Difaaca ee Sirdoonka iyo Amniga, Ronald Moultrie iyo Ku-xigeenka Agaasimaha Sirdoonka Badda Scott Bray.
Labaduba waxay ku lug lahaayeen baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan 143 aragtiyood oo lagu faahfaahiyey warbixin ay sannadkii hore sii daayeen qaybta Pentagon’s Aerial Phenomenon Task Force, oo ah xafiis tan iyo markii lagu beddelay Ciidanka Aqoonsiga Walxaha Hawada iyo Maarayntooda.
Qaybta cusub, oo uu hogaamiyo Moultrie, waa in ay “ogaadaan, aqoonsadaan oo ay tilmaamaan walxaha xiisaha leh ee Isticmaalka Gaarka ah lahaan kara ee Hawada lagu arko iyo in la qiimeeyo oo la yareeyo khatar kasta oo la xiriirta si loo sugo badbaadada duullimaadyada iyo amniga qaranka.”
Ka hadalka dadwaynaha ee Suxuunta Duusha (UFO) ayaa kordhay tan iyo 2017-kii, markii la shaaciyey in Pentagon-ku uu lahaa mashruuc loo yaqaan Barnaamijka Aqoonsiga Khatarta Hawada Sare (AATIP) kaas oo u xilsaaran aqoonsiga (ama ugu yaraan isku day lagu aqoonsado) walxahan.
Warbixintii sannadkii hore ee loo sii daayay Congress-ka, iyadoo si wayn loo sireeyey oo loo sogordahay, ayaa si maldahan u sheegtay in Pentagon-ku uu ku lug lahaa falanqaynta “teknoolojiyad horumarsan” oo u muuqata inay muujisay UFO-du, taas oo ay u kala qaybiyeen qaybo badan, waxayna warbixintu qirtay in Suxuunta Duusha laga saaray qayb gaar ah oo lagu sheegay “UAP [unexplained aerial phenomena] oo ah ifafafaale aan la sharraxi karin.
FALANQAYNTA WARKA: Si kastaba, dunida ayaa rumaysan inaysan jirin wax la yiraahdo Suxuun Duusha, balse ay noqon karaan mashiinno ay dalalkani si qarsoodi u samaynayaan ugana iibinayaan ra’yul caamka dunida, si hadhoow dano la leeyahay loogu fushado haddii la doono, iyadoo ay dadka ka dhaadhacsan tahay inay walxahani cirka kasoo dhac yihiin.
Previous articleXUURAAN XAREEDAYSAN: Waa kuwee 3-da musharrax ee ugu cad cad doorashada madaxtinnimada ee barri qabsoomaysa?!
Next article”Waxay daba socdeen kiis culus balse midna magaalada ayaa lagu diley midna…” – Muxuu salka ku hayn karaa dagaalka Ukraine?!! (Qaybtii 2-aad)
(Muqdisho) 26 Maajo 2022 - Todobaadkan ayuu xafiiska la wareegay Madaxwaynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa waxay dad badan ka hadlayaan doodda ku...